Tamin’ny 1996 no Fotoana Farany Nisian’ny Olona Marobe Tahaka Izao Nanao Fitokonana Tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2017 15:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Français, Ελληνικά, English
Ny fanangonana olona betsaka indrindra tao Lango da Balata, afovoan'i São Paulo. Sary: Ricardo Stuckert, nahazoana alàlana.
An-tapitrisa ireo mpiasa nitokona tao Brezila nanohitra ny fanalefahana ny lalàna momba ny asa sy ny fandraisana fisotroan-dronono, lalàna natosiky ny governemanta mpifikitra amin'ny nentindrazana, tarihan'i Michel Temer, izay nisolo an'i Dilma Rousseff ho filohan'i Brezila, herintaona taorian'ny dingana iray fitsipaham-pitokisana niteraka resabe.
Tany amin'ny ankamaroan'ireo tanàndehibe dia nikatona tamin'ny ampahany ireo fitateram-bahoaka, isan'izany ny midadasika indrindra ao amin'ny firenena, São Paulo. Isan'ireo nampiato ny asa nandritry ny 24 ora ireo banky, ny mpiasan'ny indostrian'ny solika, ny mpampianatra ary ireo mpiasam-panjakana, nanomboka ny mamantonalin'ny Zoma 28 Aprily. Ireo mpikatroka avy amin'ny hetsika sosialy sy ireo sendikàn'ny mpiasa no nitarika azy ireo, izay nikarakara fihetsehambahoaka ihany koa.
Tsy nitovy tamin'ireo hetsipanoherana nitranga matetika tao Brezila nandritry ny taona telo farany lasa teo, fa nitranga tany amin'ireo tanàna somary kelikely kokoa sy ireo tanàna mahantra manodidina ireo tanàndehbe ihany koa ireny fihetsiketsehana ireny. Nanomboka ny maraina vao mangirandratsy, nobahanan'ireo mpanao hetsipanoherana ny sasany tamin'ireo làlambe migodana mampitohy faritra ao amin'ny firenena, ny tetezana, ny seranampiaramanidina ary ny toerana fiaingàn'ny fiara fitaterana. Marobe ny olona no nitatitra hoe toy ny Alahady na andro tsy fiasàna ilay andro.
Tany amin'ny 1996 no fotoana farany nahitàn'i Brezila fitokonambe azo ampitahaina amin'ity, fony i Brezila teo ambany fitantanan'ny filoha iray hafa mpandàla ny fitsitsiana. Tao amin'ny Twitter, nalaza nandritry ny Zoma ilay tenifototra #GreveGeral #BrasilEmGreve.
Mpanao hetsipanoherana tao Belo Horizonte, tanàna fahefatra lehibe indrindra ao Brezila. Sary: Mídia Ninja CC BY-SA 2.0
Tamin'ny herinandro lasa, nankatoavin'ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka ao Brezila ireo fanavaozana momba ny asa izay mety hampitombo ho 48 ora ny ora iasàna isankeriandro, hampihena ny sazin'ireo orinasa mandroaka mpiasa, ary hanao izay hampananosarotra ny fanenjehan'ireo mpiasa ny mpampiasa azy teo aloha.
Ilay volavolandalàna dia ampahany amin'ireo fanavaozana naroso maikamaika nasesik'i Temer, izay misitraka ny hamaroana isa ao amn'ny antenimiera mpanao lalàna, hatramin'ny tohana avy aminìny sehatry ny fandraharahàna ao Brezila, na eo aza ny laza politikany miha-rendrika. Fitsapankevitra iray nataon'ny Ipsos naboraka tamin'ny herinandro lasa no mametraka ny taham-pankatoavany ho zara raha nahazo 4 isanjato. Ireo volavolandalàna hafa nivadika ho lalàna tamin'ny taona lasa dia nahitàna ny fampiatona ny fampitomboana ireo fandaniambolam-panjakàna sy fanaovana lalàna izay manaisotra ireo fameperana momba ny famatsiambola avy any ivelany. Ato anatin'ireo herinandro vitsy hoavy, andrasan'ny kaongresy ihany koa ny fifidianana ireo fanavaozana goavana momba ny fisotroandronono.
Lazain'ny governemanta fa tena ilaina ireo fanavaozana mba hiatrehana ny tsy fahampiana goavana eo amin'ny volam-panjakana, ary ny PMDB , antoko politika avy amin'ny elatra afovoany, no voalohany nanambara izany tany amin'ny faramparan'ny 2015 tany, tao anaty antontan-taratasy iray nitondra ny lohateny hoe “Tetezana mankamin'ny Hoavy.” Fotoana fohy talohan'ny namaràn'ilay antoko ny 12 taona niarahany tamin'ny Antokon'ny Mpiasa no namoahany ilay drafitra — fivakisana tena lehibe tokoa namela ny Kaongresy hanao mora foana ny fitsipaham-pitokisana an'i Dilma Rousseff tamin'ny Aprily 2016. 54 isanjaton'ny vato avy amin'ny sehatra samihafa tamin'ny Oktobra 2014 no nahalany an'i Rousseff, mampametraka fanontaniana momba ny maha-ara-drariny ireo fanavaozana vaovao entin'ny governemanta.
Tranganà kolikoly mpiseho foana tsy msahatra, miaraka amin'ireo fifanolanana vaovao niseho tamin'ny herinandro lasa nahatafiditra ireo mpitarika antoko lehibe sy i Temer izy tenany mihitsy, no nampitombo ihany koa ny tsy hafalian'ny vahoaka sy mitondra ny firenena ho anaty toerana tsy azo antoka mandra-pisian'ny fifidianana solombavambahoaka hatao amin'ny 2018. Na i Temer izy tenany aza toa ho voaràra tsy hahazo mifaninana amin'ny fifidianana, satria efa voampanga ho nanitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fifidianana izy tamin'ny 2014. nitarika ireo mpanakiana hanipika fa ho an'ireo mpifidy amin'ny hoavy dia tsy olona tomponandraikitra izy, satria izy no manosika ny betsaka amin'ireo politikam-panjakana tsy lanin'ny vavonin'ny vahoaka.
Fihetsiketsehana iray tao São Paulo, faritra atsimo, vao maraina be. Sary: Mídia Ninja CC BY-SA 2.0
Marobe no tsy nankasitraka ilay fitokonambe androany. Ireo vondrona mpifikitra amin'ny nentindrazana, toy ny Movimento Brasil Livre sy ny Vem pra Rua, izay lohalaharana tamin'ireo fihetsiketsehana nankasitraka ilay fitsipahana fitokisana tamin'ny 2015 sy 2016 ary manohana ireo fanavaozana mifamatotra amin'ny fitsitsiana, milaza an'ireo hetsipanoherana ho sehatra iray fotsiny ho an'ny Antokon'ny Mpiasa. Samy nanomboka fanentanana tety anaty media sosialy ny roa tonta mba hiantsoana ny olona hanapaka ny tady ka handeha hiasa, raha ny Hetsika Afaho i Brezila kosa, izay amin'ny ankapobeny dia mpanao kabary fandresena lahatra somary maherihery vaika ihany, niantso ireo mpanao hetsipanoherana ho “mpampihororoho.”
Mpanao hetsipanoherana tao São Paulo. Sary: Mídia Ninja CC BY-SA 2.0
Naparitaky ny polisy tamin'ny entona mandatsa-dranomaso sy bala fingotra ny sasany tamin'ireo olona marobe, ary tsy voakitika kosa anefa ny betsaka tamin'ireo fihetsiketsehana hafa nataon'ireo vondrona. Tao São Paulo, 16 ireo mpikatroka avy amin'ny Hetsiky ny Mpiasa Tsy Manan-kialofana ao Brezila no notànan'ny polisy, hetsika izay misolo vava mandresy lahatra amin'ny hanomezana trano sosialy sy azo lazaina fa hetsika sosialy goavana indrindra ao Brezila amin'izao fotoana izao, amin'ny filazana azy ireo ho meloka hono ny fanaovana “fikambanana mpanao heloka bevava.”
Tao Rio de Janeiro, tamin'ny fiandohan'ny hariva dia vahoaka marobe mpanao hetsipanoherana no naparitaky ny polisy.
Andianà PM mpandrava korontana mizotra mankany amin'ireo mpanao hetsipanoherana ao afovoan'i Rio
Raha ny ankamaroan'ireo fihetsiketsehana no naparitaka, ny harivan'ny Zoma no nitranga tao afovoan-tanànan'i São Paulo ny fivangongoana gaovana indrindra ary nandeha nankany amin'ny tranon'i Michel Temer teo akaiky eo ireo mpanao hetsipanoherana.
Hetsipanoherana iray tao Salvador. Sary : Mídia Ninja CC BY-SA 2.0
Tany amin'ìreo renivohitra Eorpeana sasantsasany, nisy ihany koa fihetsiketsehana somary kelikely kokoa ho fanohanana ireo mpanao hetsipanoherana tao Brezila, isan'izany ny tao Berlin.
Ireo any am-pielezana manao fihetsiketsehana ao Berlin ho fanohanana ilay fitokonana faobe manerana ny firenena